ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ပထမအကြိမ် COVID-19 မျိုးဗီဇပြောင်း Lambda ပိုးရှိသူအား တွေ့ရှိ - Xinhua News Agency
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Quezon မြို့၌ ဩဂုတ် ၆ ရက်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးက COVID-19 ရောဂါဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးလုပ်ထုံးလုပ်နည်း လိုက်နာမှုများ သေချာစေရန် စစ်ဆေးနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
မနီလာ ၊ ဩဂုတ် ၁၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာန(DOH)က ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် အသက် ၃၅ နှစ် အရွယ်ရှိသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံ၌ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် မျိုးဗီဇပြောင်းပိုး ဖြစ်သည့် Lambda ပိုး ပထမဆုံး တွေ့ရှိကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။
ယင်းလူနာသည် ရောဂါလက္ခဏာ ပြသမှုကြောင်း ၊ ၁၀ ရက်ကြာ သီးခြားခွဲထားပြီးနောက် ပြန်လည်သက်သာကောင်းမွန်လာကြောင်း ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာန(DOH)က ပြောကြားပြီး ဖြစ်ပွားမှုအား စုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်း နှင့် ခြေရာခံခြင်းများ ပြုလုပ်နေကြောင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Lambda မျိုးဗီဇပြောင်းပိုးအား ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းက စိတ်ဝင်စားဖွယ်မျိုးဗီဇသစ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာန(DOH)က Lambda မျိုးဗီဇပြောင်းပိုးသည် SARS-CoV-2 ကူးစက်နိုင်မှုကို အကျိုးသက်ရောက်သည့် အလားအလာရှိကြောင်း နှင့် လတ်တလောတွင် ဖြစ်နိုင်သော ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ လက်တွေ့အရေးပါမှုကို စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ ကျန်းမာရေးဌာန(DOH)က ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် COVID-19 လူနာသစ် ၁၄,၇၄၉ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိကြောင်း ကြေညာခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလက ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စတင်ချိန်မှစ၍ တစ်ရက်တည်းတွင် ကူးစက်မှု အရေအတွက် ဒုတိအမြင့်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သော လူနာသစ်များကြောင့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ စုစုပေါင်း အတည်ပြုလူနာ ၁,၇၄၁,၆၁၆ ဦးထိ ရှိလာခဲ့သည်။ဩဂုတ် ၁၁ ရက်မှစ၍ ဆေးရုံများတွင် COVID-19 လူနာများ မြင့်တက်လာသည်နှင့်အတူ ရုန်းကန်နေရပြီး လူနာသစ် ၁၂,၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း သိရသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့် လူနာ ၂၇၀ ဦး ထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် သေဆုံးသူအရေအတွက် ၃၀,၃၄၀ ဦးထိ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း DOH ထံမှ သိရသည်။
ဆေးစစ်မှု နောက်ဆုံးအသုတ်တွင် လွန်စွာကူးစက်တတ်သော Delta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုးရှိသူ ၁၈၂ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိပြီး သေဆုံးသူ ၁၇ ဦး အပါအဝင် စုစုပေါင်း အရေအတွက် ၈၀၇ ဦးထိ ရှိလာခဲ့သည်။ Delta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုး အပြင် Alpha နှင့် Beta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုး ရှိသူများကိုလည်း ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်း DOH ထံမှ သိရသည်။
ကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများက လွန်စွာကူးစက်တတ်သော Delta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုးကြောင့် နိုင်ငံအနှံ့ ကူးစက်မှုများ မြင့်တက်စေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
အစိုးရသည် နိုင်ငံအနှံ့ ကူးစက်မှု အန္တရာယ် အမြင့်ဆုံး နေရာများ နှင့် မနီလာမြို့တို့၌ COVID-19 ရောဂါ ဆေးရုံတင်ကုသမှုများအား ထိန်းချုပ်ရန် ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများကို နှစ်ဆတိုးမြှင့်ထားကြောင်း သိရသည်။
ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ သမ္မတ Rodrigo Duterte က မနီလာမြို့နှင့် နေရာတစ်ချို့တွင် ဆေးရုံများ၌ လူနာပြည့်နှက်နေခြင်းမှကာကွယ်ရန် နှင့် Delta မျိုးဗီဇပြောင်းပိုး ပြန့်နှံမှုအား ထိန်းချုပ်ရန် ဩဂုတ် ၆ ရက်မှ စ၍ ရက်သတ္တပတ် နှစ်ပတ်ကြာ တင်းကြပ်သည့် lockdown အစီအစဉ်အား သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
လူဦးရေ ၁၁၀ သန်းရှိသည့် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၌ ရောဂါဖြစ်ပွားမှု စတင်ချိန်မှစ၍ လူဦးရေ ၁၆ သန်းကျော်အား စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Philippines detects 1st COVID-19 Lambda variant case
MANILA, Aug. 15 (Xinhua) — The Philippines’ Department of Health (DOH) on Sunday confirmed the first case of the Lambda coronavirus variant ina35-year-old female.
“The case was asymptomatic and recovered after undergoing the 10-day isolation period,” the DOH said, adding it is conducting backtracing and case investigation.
The Lambda variant was classified asavariant of interest by the World Health Organization. The DOH said the Lambda variant “has the potential to affect the transmissibility of SARS-CoV-2 and is currently being monitored for its possible clinical significance.”
The DOH also reported 14,749 new COVID-19 infections on Sunday, the second-highest daily tally since the outbreak began in January last year.
The caseload brings the total number of confirmed cases in the Southeast Asian country to 1,741,616. Since Wednesday, the Philippines has been reporting over 12,000 new cases as hospitals struggle withasurge of COVID-19 patients.
The death toll climbed to 30,340 after 270 more patients died from the viral disease, the DOH added.
An additional 182 highly contagious Delta variant cases were also detected in the latest batch of genome sequencing, bringing the total in the country to 807, including 17 deaths. Aside from the Delta variant, the DOH said it also detected more Alpha and Beta variants cases.
Health authorities said the highly infectious Delta variant is driving the nationwide surge of infections.
The government is doubling its efforts to control COVID-19 hospitalizations in Metro Manila and several high-risk areas across the country.
Philippine President Rodrigo Duterte placed Metro Manila and some areas under two-week hard lockdown since Aug.6to curb the Delta variant’s spread and prevent crowding in hospitals.
The Philippines, withapopulation of 110 million, has tested over 16 million people since the outbreak. Enditem
Photo – A member of the Philippine National Police checks on motorists to make sure they follow COVID-19 health protocols atapolice checkpoint in Quezon City, the Philippines on Aug. 6, 2021.
The Philippines’ Department of Health (DOH) reported on Friday 10,623 new coronavirus disease (COVID-19) infections, bringing the total number of confirmed cases in the Southeast Asian country to 1,638,345. (Xinhua/Rouelle Umali)
Related Topics:COVID-19Lambda #PhilippinesvariantXinhuamyanmarဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမျိုးဗီဇပြောင်း